stETH na ETH na-egosi ihe ịrịba ama nke iche - CoinWorldMap
Mee 14, 2022 Ethereum
Nkeji Lido na-ekwu na stETH rere na mbelata 4,2% na ETH n'ụtụtụ Fraịde. Lido ekwuwapụtala na ọ ga-enye ndị ọrụ ihe mkpali inye ego na ọdọ mmiri Curve ọhụrụ ya. Dị ka Lido si kwuo, ndị ọrụ leveraged "nwere ike ịnọ n'ihe ize ndụ nke mmiri mmiri."
Usoro Liquid staking Protocol Lido adọla aka na ntị na ọnụego mgbanwe n'etiti Ether (ETH) na stETH - akara ngosi nke na-anọchite anya Ether staked na Lido - esila na peg ya na otu n'ime ọgba aghara ahịa crypto.
Usoro ahụ na-enye ndị ntinye aka ya ohere iji akụ ha depụtara na Lido nweta nkwụghachi karịa nkwụghachi mbụ ha. Mana Lido kpughere na tweet n'ụtụtụ Fraịde na stETH na-ere ahịa na mbelata 4,2% na ETH na ọdọ mmiri Curve isi.
Nkeji a mara na ọ bụ ezie na ndị na-ejide stETH ogologo oge na ndị na-enye mmiri mmiri adịghị n'ihe ize ndụ, ọnọdụ stETH leveraged nọ n'ihe ize ndụ.
"Ọ bụrụ na ị nwere ọnọdụ leveraged, dị ka site Aave, ị nwere ike ịnọ n'ihe ize ndụ nke ịbụ mmiri mmiri," ka protocol na-ekwu. "Ịkwesịrị ibelata ihe egwu nke ọnọdụ ọ bụla agbadoro anya nwere ihe ahụike siri ike, dịka ọmụmaatụ site n'ịgbakwunye mgbakwunye."
On friday ETH ahia ihe dika $2080. Ka ọ dị ugbu a, stETH ruru ihe ruru $2000.
Lido kwuru na ọ na-atụgharị ọdọ mmiri ọzọ iji kwalite oke mmiri na gburugburu stETH-ETH peg. Ọdọ mmiri ahụ na-enye ihe mkpali ndị ọzọ nke otu nde Lido DAO (LDO).
LDO rere na $1,68, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 10% n'ime awa 24.
“Anyị niile maara na e wezụga ihe ize ndụ, ọ dịghị ụgwọ ọrụ; N'otu oge ahụ, Lido na-arụ ọrụ iji nọgide na-enwe mmekọrịta dị mma," Lido dere na blog m. - N'ọnọdụ nke mmiri mmiri, a ga-ere ihe onwunwe ahụ iji kpuchie ụgwọ ahụ. Iji hụ na a na-enwekarị oke ego zuru oke n'ahịa, anyị na-enyocha ntozu oke mmiri site na iji ihe ngosi gbakọtara."
Na Fraịde, mgbe mmalite nke blockchain gasịrị Terra Maka oge nke abụọ, Lido kwupụtara na ndị ọrụ nwere ike jikọọ bETH - ihe nnọchianya nke stETH na Terra anchor protocol - laghachi na Ethereum.
Ebe ọ bụ na ndị na-ejide ya na-ahapụ Anchor wee nata stETH, ọ bụrụ na ha chọrọ ịkwụ ụgwọ na fiat, ha ga-ebu ụzọ ree stETH maka Ether, ebe ọ bụ na nnukwu mgbanwe na-edepụta naanị ihe onwunwe ha, ọ bụghị ihe mmepụta ya.
Ọtụtụ n'ime bETH gbanwere na Curve bụ n'ihi nbibi nke mbinye ego na Anchor bụ nke a na-emekọghị ọnụ wee zụta ya na mbelata.
LUNA na UST edepụtara na Binance Ọzọ